Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro izofika ngombala omnyama ngokuthuthuka kwekhamera | Izindaba ze-IPhone
Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro izofika emnyama nge-matte nangokuthuthuka kwekhamera
U-Alex Vicente | | iPhone, iPhone 13, Izaziso, Ama-terminals we-IPhone
Amahemuhemu amasha mayelana nezici ze-iPhone 13 asifinyelela. Kulokhu, babhekisa kwi-iPhone 13 Pro, imodeli okuyiyona, I-YouTuber EverythingApplePro iveze izindaba ukuthi izobandakanya ekwethulweni kwayo, kokubili ngokwakhiwa nokusebenza kwayo.
I-YouTuber ibizokuthola lokhu kuvuza kuMax Weinbach, onerekhodi elingajwayelekile kakhulu lapho enikeza izibikezelo zakhe ku-Apple. Ngokusho kwe-YouTuber, I-Apple izofaka ukuthuthuka kwikhwalithi yomsindo yamahedfoni ngokusebenzisa i-iPhone 13 Pro ngenxa yokuqondisa ugongolo. Ukuyichaza kalula, i-Apple izobe icabanga ukuqondisa umsindo owethulwa ngamahedfoni ngasendlebeni ukuze ingene ihlanzeke kakhulu kuye ngokuthi ibekwa kanjani endlebeni. Ngakolunye uhlangothi, naye uphawula lokho ukukhanselwa komsindo kungathola ukuthuthuka kule modeli ye-iPhone.
Imithombo kaMax Weinbach ikhombisa ifayili le- dizayina kabusha ngemuva kwekhamera uma kuqhathaniswa ne-iPhone 12 . Lokhu kuzophuma kancane, ngaleyo ndlela kuncishiswe i- "hump" ekhona kusukela nge-iPhone 6. Kule ndlela entsha, amalensi nesikwele esivele sivele manje zizoncishiswa. Ngamafuphi, ikhamera izohlala futhi ivelele kancane ngemuva kwe-iPhone yethu.
Kepha ukuvuza kwekhamera kuyaqhubeka kusukela ngemithombo yabo, ngeke kube nomehluko phakathi kwekhamera ye-iPhone 13 Pro ne-iPhone 13 Pro Max njengoba kukhona kumodeli 12. I-Apple izosebenzisa inzwa efanayo kuwo womabili ama-terminals ngakho-ke ngeke kube khona umehluko njengasesimweni samanje lapho i-iPhone 12 Pro Max inenzwa enkulu ngokubonga naku "hump" ophumela kancane kancane.
I-Apple izobe icabanga nokulungiswa kwemodeli emnyama, ukuyisa kumnyama omnyama ngenkathi yethula umbala omusha we-bronze / orange wezinhlobo zePro nePro Max. Labo baseCupertino nabo babengalalela abasebenzisi futhi bathuthukise i-chassis yensimbi ukuze inkinga yezinyawo yehliswe kakhulu.
Ekugcineni, ukuvuza kubhekisa ekusebenzeni kwekhamera, lapho I-Apple izosebenzisa inqubo entsha ngokuya ngesoftware yokuqina kwesithombe ukuqinisekisa ukuthi isihloko ogxile kuso sihlala maphakathi naphezu kokunyakaza okungenziwa ngesikhathi sokuqoshwa kwe-movie. Inkampani nayo izothuthukisa imodi ye-portrait kumamodeli we-Pro usebenzisa isithwebuli se-LiDAR nokuthuthuka ku-ISP ye-chip entsha.
Sizobona ukuthi konke lokhu kuvuza ekugcineni kuzogcwaliseka lapho i-Apple yethula ukuphela kwayo okusha. Ukungeza i- amahemuhemu wakamuva wenotshi encane, I-iPhone entsha ingabonisa intuthuko enkulu maqondana nama-nuances wokuklama, ngakolunye uhlangothi, azolandela ngokubanzi okubonakalayo ku-iPhone 12.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro izofika emnyama nge-matte nangokuthuthuka kwekhamera
Ukuvinjelwa kweSuez Canal kuzothinta imboni yezobuchwepheshe
I-Apple ingaqalisa i-Apple Watch yezemidlalo eyeqisayo